गोप्य अंगको परिक्षण गर्नुपर्छ भनेर सुइ लगाएपछि….. – Naya Kura Daily
September 5, 2020 358
काठमाडौ । निजगढ नगरपालिकाको ग्रामिण भेगमा रहेको एक स्वास्थ्यकचौकीमा कार्यरत प्रमोद शाह, (स्वास्थ्य सहायक) ले उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकी आएकी महिलालाई गलत काम गरेका कारण अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा उनको उपचार सुरु भयो । उनलाई स्वास्थ्यकर्मीले सलाइन् दिए । त्यतीनैबेला उनी निदाइन । उनीसंगै गएकी सानिमा पनि घरमा एउटा सानो काम गर्न बाँकी रहेका कारण ति युवतीलाई स्वास्थ्य चौकीमै छोडेर घर आइन् ।
त्यही मौकामा स्वास्थ्यकर्मी प्रमोद शाहले युवतीलाई एउटा सुई लगाइदिए । त्यसपछि ति युवती वे’हो’स हुन थालिन् । अनि स्वास्थ्यकर्मीले गोप्य अंगको परिक्षण गर्नुपर्छ भने । युवतीले मेरो गोप्य अंग जाँच गर्न दिन्न भनिन् । तर स्वास्थ्यकर्मीले ज’व’र’जस्ती तान्न लागे । त्यही अवस्थामा उनी त्यहाँवाट भा’गि’न् ।
वे’हो’स बनाउने सुइ लगाएका कारण उनी दौडिदै जाँदा घर नजिकै पुगेपछि फेरी वे’हो’स् भइन् । उनलाई फेरी त्यही स्वास्थ्यचौकीमा भर्ना गरेर आए । सुरुमा परिवारका अन्य सदस्यसंग गएर के के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले एउटा सलाइन् चढाउनुपर्ने र एउटा सुइ लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यती बेला उनले शरिरको परिक्षणको कुरा गरेका थिएनन् । तर युवतीलाई एक्लै देखेपछि उनले सुई लगाएर वे’हो’स बनाएर गलत काम गर्न लागेका थिए । ति स्वास्थ्यकर्मीले यस अघि पनि युवतीलाई स्वास्थ्य परिक्षण गर्न जाँदा गलत तरिकाले छुन खोज्ने गरेका थिए । त्यो दिन उनले महिलाको इच्छा विपरित उनको शरिरमा हात लगाएपछि यो कुरा कसैलाई नभन्नु समेत भनेका थिए । अहिले ति स्वास्थ्य सहायक प्रहरी हिरासतमा छन् ।
Prevड्युटीमा बेहोस भएका प्रहरी जवानको उपचारको क्रममा मृत्यु
Nextपत्ता लाग्यो आन्टिको अर्कै नाठो! भतिजो लाई यसरी फसाएको रहस्य खुल्यो!! तुरुन्तै हेर्नुस:
अवैध सम्बन्धले निम्त्याएको फिल्मी शैलीको हत्या !
जेलमै बिहे गर्न पाइने गरी कानून बन्दै
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन आज तपाईको राशिफल वि.सं.२०७७ साल भाद्र २५ गते । बिहीबार ।ईश्वी सन२०२० सेप्टेम्बर १० तारिख